Assignment Help, Cloud Based ERP System, Microsoft NAV Certification » Tea Break » General Discussion » Tea Time Guff-Shup » once uponatime in new orleans
1 once uponatime in new orleans on 3rd April 2009, 12:05 pm
रूम म बस्दा बोरे लागि राथ्योउ । लैइसन्स निकाल्न पाए घुम्न जान पाइन्थ्योउ भनेर सोची राथे । बद्री दाई ले जने हो त भनेर सोध्नु भयो अनी मैले पनि जाउ नत भने : फोन लगये बिनय पाठक दाई लाई लुजीयाना ,बातन रुग । त्यहा पुगियो ।थकाई लागि राथ्योउ । अनुपम म र बदी दाई थियौ । म कहिले पनि प्लान नबनएर हिंड्ने मान्छे हावा तरिकाले हिडियो । त्यहा गये पछी न्यू ओरलिएन्स जने प्लान बन्यो।
त्यो चाही जानै पर्ने ठाउँ रहेछ । बोउबोर्न स्त्रीत घुमियो । अनी त्एस पछी हम्ले फोन लगायोउ । अनी रती २ बजे तिर त्यहा पुगियोउ। त्यो भाई मेरो इन्दिया म पढ्ने एक जना भाई को दाई रहेछ । केटाहरु मस्ती गरेर बसेका छन । सब खाएर फित्तु । तर तिनिहरुले हम्लाई धेरै नै रेस्पेक्त गरे । केक बियर अनी मम बनएर खुवाये । एक जना महिला र उस्को छोरी पनि पार्टी मा थियो । कोइ केटाहरु टि.भी मा फूटबल खेली राथे । अनी हामीहरु बहिरा बर्दलिमा बसेर गफ गर्न थालयोउ। दा दाई भन्थे मलाई चाहइ मेरो दाई लाई केही पनि नभन्नुस् है मैले पिउछु भनेर बह्न्दै थियो ।भाउजु कुइरिनी रहेछ । बियर पिउदै कुर गर्दै थिई । केटाहरुलाई सम्झौदै थिन । मैले त उस्को आफ्नै भाउजु होला भन्थनेको थिए । अनी दाई कहाँ रहेकह यिनिहरु को जस्तो हामी सबैलाई लागि रहेको थियो । सबै जना भर्खर क केटाहरु । पत्यनौ गाह्रो । तिन्हरु के जना मद्एकै बुडी पो रहेछ । मलाई त अचम्म लाग्यो। आउता सानो छोरी पनि थिई ।माया लग्ने खाल्को। उनिहरुको जने बेला भएछ । जने बेला म त आर्को ठुलो छोरी पनि रहेछ । उस्को बुडी कित्चन मा लद्डा उस्को साथीले धेरै मोटी भन्दे छ । तिन्हरु एक्दुम रिसअएक थिए . याहू मा च्याट गरदा लभ परेको रे . क्य अछम्म च्याट गरेर नि लभ पर्दो रहेछ। फेरी पनि अाउदै गर्नु भन्दै थिए केटाहहरुले।
2 Re: once uponatime in new orleans on 3rd April 2009, 3:01 pm
3 Re: once uponatime in new orleans on 3rd April 2009, 10:22 pm
ani sabdaharu ma hindi misiye jasto laghyo, anyway keep rocking
4 Re: once uponatime in new orleans